देव गुरुङको प्रस्तावमा ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता बनेपछि प्रचण्डले के भने...?
देव गुरुङको प्रस्तावमा ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता बनेपछि प्रचण्डले के भने…?
जेठ ०५, २०७५ BNNTV
नेकपा एमाले र माओबादी मिलेर बनेको एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको नेतामा शनिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको एकीकृत पार्टी नेकपाको पहिलो संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङलको प्रस्तावमा ओली सर्वसम्मत् संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। त्यसैगरी उक्त बैठकमा नेकपाका
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता हुनु सामान्य परिघटना नभइ असाधारण रहेको बताएका थिए। नेकपाको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकता प्रक्रिया नेपालको मात्रै नभइ विश्वकै असाधारण घटना भएको बताए।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र नयाँ परिस्थितिमा समाजवादको यात्रा तय गर्नका लागि नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को एकताले मार्ग प्रशस्त गरेको बताए ।
दुई पार्टीको एकतापछि देश र विदेशबाट बधाईका सन्देश लगातार आइरहेको जानकारी दिँदै उनले विश्व समुदायले पनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई नजिकबाट नियालीरहेको छ भने। आफूहरुको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान पनि एकता इतिहासकै महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रुपमा स्थापित भएको छ ।”
इतिहास, नेपाली जनता र देशले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरु एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको र त्यो पूरा भएको उनको भनाइ थियो ।
विकास समृद्धिको यात्रालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने दायित्व समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र वर्तमान सरकारको काँधमा आएको अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित : शनिबार, जेठ ०५, २०७५१६:३५
भारतीय दुतावासको फिल्ड अफिस हट्छ – प्रधानमन्त्री ओली
राणाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित !
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरिँदै : प्रतिपक्ष काँग्रेस प्रतिकार गर्ने तयारीमा !
एक्कासी सिंगापुरबाट प्रचण्डले माधव नेपाललाई फोन गरे ! के भयो त फोनमा कुराकानी ?
४/४ पटक प्रधानममन्त्री बन्दा पनि फेरी संसदीय दलको नेता बन्नु पर्ने ? देउवालाई पौडेलको कडा प्रश्न